Sawiro Dhalinyaradii Kufsiga ka geestay Galdogob oo lagu xukumay Xukun Cusub. – Xeernews24
Sawiro Dhalinyaradii Kufsiga ka geestay Galdogob oo lagu xukumay Xukun Cusub.
Culima’udiinka deegaanka oo iyagu lahaa go’aan ka gaadhista xukunkan, ayaa waxaa la sheegay in ay ku saleeyeen Shareecada Islaamka.
Culimada, ayaa wiilasha ku xukumay xadhig u dhaxeeya shan illaa toban sano, ganaax lacageed iyo jeedal/karbaash u dhaxeeya boqol illaa laba boqol.
Eedeysane-yaasha oo lix gaadhaayay, ayaa waxaa goobta xukunka lagu soo bandhigay shan oo keliya, iyadoo midka kalana la sheegay in weli baxsad uu ku maqan yahay. Eedeysane-yaasha ayaa madasha maxkamadaynta ka soo muuqday, iyagoo min lug iyo gacan ka katiinadeysan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/Galdogob4.jpg 362 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-29 10:54:262017-01-29 10:54:26Sawiro Dhalinyaradii Kufsiga ka geestay Galdogob oo lagu xukumay Xukun Cusub.
Sir la Helay iyo Soomaaliya oo Noqotay Hilib Cidla yaal Xasan Sheekh oo dhoolatus ka nixiyay Musharaxiinta xalay ka sameeyay Muqdisho...